Meelaha arjiga ee betaine surfactants
La daabacay: 20-12-14
Maaddaama ay tahay walax dareere ah, hydroxybetaine waxay leedahay milmo wanaagsan oo biyo ah heerkulka ballaaran iyo saameyn dhaqid wanaagsan. Waxaa lagu dabaqi karaa waxyaalaha lagu maydho dareeraha sare leh ee biyaha lagu nadiifiyo. Alkylamide betaine waxay leedahay koror xoog leh xumbada, cuncun hoose, iyo xumbadu way xasilloon tahay, waxaana loo isticmaali karaa saabuunta iyo saabuunta dareeraha ah ee ka samaysan shaambo propyl betaine. Waxay leedahay cuncun maqaarka oo hooseeya iyo nabadgelyo sare, waxayna leedahay dareen maqaar jilicsan.
Betaine waxaa loo isticmaalaa sida emulsifier ee emulsions la isku qurxiyo. Xalkiisu waa xasilloon yahay, wuxuu leeyahay faafin wanaagsan markii la mariyo maqaarka, wuxuu leeyahay saameyn daryeel maqaar oo wanaagsan, wuxuuna leeyahay astaamo bakteeriyo wanaagsan leh wuxuuna hodan ku yahay nafaqada maqaarka.
Waxyaabaha loo yaqaan 'amphoteric surfactants' ee ku saleysan Betaine waxaa loo isticmaalaa shaambooyada leh sunta anionic iyo non-ionic sababo la xiriira xumbo wanaagsan, sun, sunta, iyo iska caabbinta biyaha adag. Iska yaree cuncunka iyo saameynta kale.
Dharka dharka, daabacaadda iyo dheeh
Soo saarida waxyaabaha loo yaqaan 'betaine amphoteric surfactants' waxay ka yimaadeen arjiga warshadaha dharka. Betaine amphoteric surfactant waa mid ka mid ah qeybaha ugu fiican ee kiimikada xasiloon. Waxay haysaa sifooyinka amphoteric iyo xasilloonida kiimikada ee ballaaran pH. Sidaa awgeed, betaine amphoteric surfactant wuxuu ku habboon yahay inuu yahay wakiil isku dheellitiran, Waxaa loo adeegsadaa inuu yahay wakiilka qoynta, wakiilka xoqida, wakiilka antistatic iyo jilicsanaanta ee kuleylka dhogorta.
Betaine amphoteric surfactants waxaa loo isticmaali karaa microemulsifiers iyo kala firdhiyeyaal. Marka la adeegsado waxyaabaha loo yaqaan 'betaine amphoteric surfactants' ee loo yaqaan 'styrene emulsion polymerization', jajabyo yaryar oo leh cidhiidhi yar (50-100)μm) waa la heli karaa. Waxyaabaha loo yaqaan 'Alkyl betaine amphoteric surfactants' waxaa loo isticmaalaa sidii emulsifiers loogu talagalay polymerization-ka styrene. Marka cinjirka la qasi jiray biyo oo la buuxiyay qayb ka mid ah xariir jilicsan, acrylic ama roogagga nayloon, waxay yareyn kartaa wasakhda; dodecyl iyo tetradecyl xididdo Alkali ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa wakiil ahaan joojinta polymerization-ka biyaha vinyl chloride; inta badan latexes-ka 'allyl latexes' waxaa lagu soosaaraa iyadoo ay joogaan lauryl betaine oo hooseeya ama coco-betaine; alkyl betaine waxaa loo isticmaalaa sidii emulsifier loo yaqaan 'cationic latex', Oo leh emulsifier cationic, oo si gaar ah loogu isticmaalo kiimikooyinka laamiga wadada, waxqabadkeedu aad ayuu uga xoog badan yahay emulsifier-aan-ionic; betaine amphoteric surfactant sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa diyaarinta emulsion sawirada, betaary stearyl waa diyaarinta iyo Emulsifier of monomer alkyl acrylate iyo acrylonitrile ee gelatin-waafaqsan polymerized hydrosol. Solku wuxuu ilaaliyaa xasilloonida ballaaran ee pH waxaana loo isticmaalaa emulsion sawir leh.
Waxyaabaha lagu daro soo kabashada saliida
Betaine amphoteric surfactants waxaa loo isticmaalaa soo kabashada saliida labaad iyo soo kabashada saliida jaamacadeed, baahintooduna waxay si gaar ah faa'iido ugu leedahay sameynta nuuradda; barakicinta microemulsions ay ku jiraan betaine ama acyl betaine amphoteric surfactants waxay hagaajin kartaa Heerka soo kabashada saliida; Alkyl betaine amphoteric surfactants waxay badalaan macdanta kaarboonate. Sababtoo ah aaladaha beta-amphoteric-ka ah waxay leeyihiin milix wanaagsan oo ku jirta xalka cusbada, laguma soo jiidi doono ion kalsiyum kala-duwan; C12 ~ 14 alkyl Chain sulfite betaine waa bakteeriya loogu talagalay bakteeriyada yareysa sulfate, taas oo loo isticmaali karo soo kabashada saliida ee la xoojiyay iyo sifaynta saliida ceyriin.
Caafimaadka iyo caafimaadka
Betaine amphoteric surfactants waxaa loo isticmaali karaa daawo, daawo, bayoolaji iyo qeybaha kale ee la xiriira. Alkyl betaine wuxuu saameyn gaar ah ku leeyahay amino acid enantiomeric iyo molecules daroogada isku dhafan oo u dhiganta; betaine amphoteric surfactant waxaa loo isticmaali karaa inuu yahay dardar-geliyaha xayeysiinta transdermal ee dawooyinka biyaha-ku milma ionic; betaine amphoteric surfactant wuxuu wanaajin karaa sii deynta walxaha firfircoon ee ku jira boomaatada ay ku jiraan neomycin sulfate iyo chloramphenicol; Sultaine wuxuu ku haboon yahay kala soocida iyo ka nadiifinta antigens-ka nidaamyada bayoolojiga, waxaana loo isticmaali karaa sida reagent reagent iyo reagent reagent; laga sameeyay walxaha Fayraska Sultaine waxay leeyihiin awood xoog leh oo ay ku joojiyaan taranka fayraska ee sambabaha jiir durey; xalka aqueous ee cetyl sultaine waxaa loo isticmaalaa in lagu daahiyo macdanta unugyada la beeray, sida unugyada unugyada wadnaha ee wadnaha oo aan dabiici ahayn, oo la hagaajin doono ka hor inta aan la hagaajin. Waxaa lagu dhex milmay xalka aaladda 'sulfobetaine amphoteric surfactant'; xalka aqueous-ka ee alkyl betaine amphoteric surfactant iyo non-ionic surfactant wuxuu ku haboon yahay daaweynta gubashada iyo qaaciidada daaweynta maqaarka casaanka iyo bararka; alkyl betaine amphoteric surfactant Surfactants sidoo kale waxay wax ku ool u yihiin daaweynta boogaha caloosha. Markii loo isticmaalo dawooyinka salicylate, waxay yareyn karaan ama ka hor tagi karaan boogaha caloosha ku dhaca ee culeyska fekerka keena ama salicylate keena; xalka octyl sulfobetaine Marka la kala saarayo mitochondria, waxay ka hortagi kartaa luminta mitochondrial carnitine. Marka uruurinta sulfobetaine ay gaarto dhowr jeer culeyska loo baahan yahay ee ka-hortagga wareejinta, waxay joojin kartaa carnitine acetyltransferase iyo carnitine palmitate transferase.
Alkyl betaine amphoteric surfactant waa wakiil wanaagsan oo dhameystira maqaarka, kaas oo maqaarka ka dhigi kara mid u adkeysanaya nadiifinta qalalan; ku darida betaine amphoteric surfactant cinjirka alkenyl wuxuu horjoogsan karaa ubaxnimada baaruudda ay kujirto wakiilka cambaareynta; stearin Acyl betaine waa kala firdhise wanaagsan, kaas oo hagaajin kara waxtarka pelletizing slurry slurry iyo boodhka ka saarista; waxyaabaha loo yaqaan 'betaine amphoteric surfactants' ee loo isticmaalo rinjiyeynta waxay leeyihiin isku dheelitirnaan qoyan iyo iska caabbinta dhaxan; Qaababka midabaynta birta, gaar ahaan kuwa qaaciddada Aluminiumku ka kooban yahay ayaa lagu qasi karaa rinjiga biyaha u adkeysanaya si looga fogaado halista qarxa, oo daaha looga dhigo inuu yeesho muuqaal macdan wanaagsan leh, dusha siman, isku dheelitirnaan wanaagsan iyo biyo celin; sulfobetaine amphoteric surfactant Waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo qalabka duubista magnetic, marka saliida methylsilyl-ka ay ku dahaadhan tahay betaine amphoteric surfactants, gudbiyaha yaraanta cufnaanta macluumaadka ee cufnaanta sare ee la kulma heerkulka sare iyo qoyaan aad u sarreeya ayaa si weyn loo yareeyay; ay kujirto sulfobetaine amphoteric Dheecaanka 'surfactant' wuxuu si isku mid ah u kala firdhin karaa budada magnetic-ka leh walxo aad u wanaagsan, taas oo markaa kor u qaadeysa magnetization-ka; betaine lauryl amidopropyl waxaa loo isticmaalaa inuu ka mid yahay qaybaha xalka aqueous acidic si loo nadiifiyo fiber galaaska. Hoos u dhac weyn ayaa ku yimaada; ku darida waxyaabaha loo yaqaan 'betaine amphoteric surfactants' bacriminta waxay kordhin kartaa nolosha shelf ee Bacriminta dareeraha ah 15 ilaa 27 toddobaad. Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo la daahiyo sameynta roobab magnesium-ka ku jira waxayna ku habboon tahay wax-soo-saarka qoyaanka waxsoosaarka wax-soo-saarka fosfooriska; Betaine amphoteric surfactant sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu doorto naxaasta, daasadda, zinc iyo biraha kale si loo helo aalado dhalaalaya.